Sida loo helo saaxiib | Niman qurux badan
Sida loo helo saaxiib
Wiilal badan ayaa caqabad weyn ku ah inay dib u soo laabtaan sida loo helo saaxiib. Waxay noqon kartaa wax ka dhashay hal khibrad nololeed oo dheeraad ah, si kastaba ha ahaatee, waa xaqiiqo taas waxay ku adkaan kartaa rag badan. Xaqiiqdi ma heli kartid gabadh sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaadan isku dayin si adag, laakiin waxaan kuu xaqiijineynaa inaan halkaan kugu caawineyno inaad ogaato sababta aadan u helin.
Qof kasta oo hadaf leh waa inuu si daacad ah oo rajo leh u rajeeyo. Si aad u awooddo inaad samayso guushan, waa inaad barataa inaad ku raaxaysato daqiiqad kasta oo aad awoodo inaad ka tagto neerfahaaga si aad u gaarto kalsoonidaas.
1 Waa inaad ka shaqeysaa gudaha qofka
2 Waa maxay tillaabooyinka la raaco si aad saaxiib u yeelato
Waa inaad ka shaqeysaa gudaha qofka
Waa inaad ogaataa inaysan jirin waxyaabo badan oo la gaari karo dadaal la’aan. Haddii aad ogolaan weydo in lagu arko, Jir ahaan iyo baraha bulshada labadaba, waxa hubaal ah in aad heli doonto fursad yar oo ay dumarku kula kulmaan.
Ha ka quusan inaad noqoto qof aan ammaan ahayn, waa inaad xoojisaa shakhsiyaddaada si aad awood buuxda u muujiso. Waxaa jira nuances badan oo la xiriira guulaha yar, oo ay ka mid yihiin in la helo qof dumar ah oo dhab ahaantii ku guulaysata isaga.
Nin shakhsiyad yar leh waa inuu xooji shay muhiim u ah sida kalsoonidaada oo kale. Laga soo bilaabo halkan, wax sida aasaasiga ah sida dabeecadaada iyo jinsigaaga. Waxaa laga yaabaa inaad tahay nin aad u qurux badan, laakiin haddii aadan haysan dhimbiilkaas, ma geli doontid dumar ku xayiran.
Waa maxay tillaabooyinka la raaco si aad saaxiib u yeelato
Waxaa jira raadi meelo aad dadka kula kulanto cusub oo aad rabto inaad u furto dadka kale. Had iyo jeer maaha inay ahaadaan meelaha cabitaannada laga cabbo, waxay sidoo kale noqon karaan iskuulo, naadiyo, xarumo isboorti... haddii ay tahay xaruntaada firaaqada, waxaad mar walba ku martiqaadi kartaa gabadhaas inay ka qayb gal xaflada ama wax meesha ku jira.
Haddii aadan haysan qalab aad kula kulanto haweenka, mar walba waad awoodaa weydiiso saaxiib inuu kuu baro. Waxaad sidoo kale raadin kartaa dalool ama xeelad si aad u awooddo inaad u fiirsato gabadhaas oo aad u soo bandhigto caawintaada, hubaal wax la jecel yahay ayaa halkan ka bilaabi kara.
Had iyo jeer hel waxa ugu fiican Iyo sida dabiiciga ah ee suurtogalka ah, waa muhiim inaad noqoto naftaada. Haddi aad iska dhigto in aad ujeedo raadinayso oo aanad daacad ka ahayn, way soo baxaysaa oo been yar ayaa dib u soo celin karta shay hore loo dhigay.
Waxaa jira u wajaho haweenka kalsooni buuxda, dabeecadda ayaa wax walba qabta, mar walbana waxaad yeelan doontaa haween ku xiiseynaya. Waxa aanay dumarku jeclayn in ninku uu u soo dhawaado hamigoodu haasaawaha oo marka jawaabta taban ay noqdaan kuwo qabow, isla weyni, barbaarin iyo danayn la’aan dhinacyada qaarkood ah.
Waa inaad dhoola caddaysaa, dareentaa nasasho iyo is-hoosaysiin. Dhammaantood waxay ka bilaabmaan nafta, sidaas darteed hubso. Haddii aad ku sugan tahay meel aad u aragto in dumarku noqon karaan kuwo soo dhaweynaya, waa inaad heshaa qof ku siinaya dareen wanaagsan. Haddii aadan aqoon sida loo baro naftaada ama aad u bilowdo wadahadal, waxaan helnay maqaallada ugu fiican "Sida loo shukaansado gabadh" o "Sida loo galo gabadh".
Uma baahnid in aad yool yeelato oo aad diiradda saarto hal gabar kaliya. Waxaad bixi kartaa dhowr maalmood ama habeen iyo balaadhi shabakadaada xidhiidhka, halkan waxaad heli doontaa wakhti aad kula kulanto gabdhahaas waaweyn si tartiib tartiib ah iyo ogow waxa ay damacsan yihiin. Shabakadaha bulshada waxaad samayn kartaa sidaas oo kale. Haddii aad la kulantay dhowr gabdhood waa in aad miisaantaa cidda aad gacanta ku hayso si aad ugu martiqaado cabitaan maalin maalmaha ka mid ah.
Hel inaad ururiso qaar ka mid ah weedho ama khiyaamo si aad ula dhaqanto hablaha aad la kulanto. Waxaan hubnaa in mar kasta oo aad la kulanto hablaha aad wada-hadalka kula dhaqanto, in ay kuu fududaanayso in aad la hadasho dhib la'aan, gaar ahaan haddii ay soo muuqato gabadha aad ku riyoonaysay.
U diyaari weedho si fiican u shaqeynaya oo ka dhiga inay dhoola cadeeyaan, iyo xitaa kuwa baraf jebiya iyo weedho xodxodasho leh. Gabdho badan ayaan hadal badnayn oo haddii aad sheeko badan diyaariso waxaa laga yaabaa inaad horayba u hadasho waxaad bilaabaysaa wax xiiso leh.
Hogaami wada sheekeysiga oo tababar si aan loo hadlin. Waxaad weydiin kartaa sida ay maalinteedu ahayd ama haddii wax xiiso leh ay beryahan danbe ku dhaceen. Laakiin sidoo kale waa inaad baro inaad dhegaysatoWaxay kaloo jecel yihiin inay u sheegaan qisadooda iyo ragga aad u xiiseeya waxay sheegaan.
Haddii aad ku guulaysato inaad ballan yeelato waa inaad qiimeysaa waafaqsanaanta qofkaas kale. Haddii aad leedahay xiriir kugu filan oo mar hore ahaan doona furaha gelitaanka wax noqon kara si tartiib tartiib ah u si rasmi ah, oo aan degdegin. Weli wax badan ayaa jira oo la falanqeynayo oo la baadhay waana inaad waqti u hurtaa taas. Xili ka bacdi waa inaad heshaa wakhti ku haboon oo aad ka codsato inay noqoto saaxiibkaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo helo saaxiib
Waa kuma ninka aduunka ugu xooga badan